တစ်ဝက်လောက်တော့ သိနေပါပြီ။ | t h oeh tan e
လိပ်ခေါင်းရောဂါကြောင့် ဆေးဖက်မဝင်တော့တဲ့အိပ်မက်များကို ပုလင်းလွတ်တစ်လုံးထဲထည့်ပြီး အပေါ်မှ အချိုမှုန့် အနည်းငယ်ဖြူးကာ မေ့လျော့မှုအဆို့တစ်ခုဖြင့် လေလုံစွာပိတ်၍ အလင်းရောင်မဝင်နိုင်သောအခန်းငယ်တစ်ခုအတွင်း သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါပြီ။
ကဗျာဆရာဆိုသည်မှာ…”ဗေလုဝ”လောက်လည်းလူသိမများ၊ ငွေရပေါက်လည်းမချောင်လျက်က အဓမ္မရတဲ့ကိုယ်ဝန်လို အများကဝိုင်းတားလည်း အနုပညာကို ဘုရားပေးတဲ့သားတော်အဖြစ်မွေးထုတ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့သူလို့သိမှုက မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင် မှင်ကြောင်ထိုးထားသော ဘီလူးရုပ်တစ်ရုပ်လို ဘယ်အချိန်ကစလို့ ရောက်ရှိနေခဲ့တာပါလဲ?
သံသရာအငြိုးငြိုးမှာ ဘယ်သေချင်းဆိုးတွေကများ ကျွန်တော့်ကို “ချစ်ခြင်းဆိုး” လို့ ကျိန်စာဝိုင်းတိုက်ခဲ့ကြပါသလဲ?
7 Responses to “တစ်ဝက်လောက်တော့ သိနေပါပြီ။”
ဟုတ်ပဗျာ ကဗျာဆိုတာ ဗေလုဝလောက် နာမည်မကြီးဘူးနော်
a hote par pae 😀
ဟူး …. တော်တော်မောသွားတာပဲ ဒီစာလေးတစ်ပိုဒ် ဖတ်လိုက်ရတာ။
ရေတစ်ခွက်လောက်တိုက်ဗျာ … 🙂
beer pae shi tae :p
ae mhar kyay kyee tae
oe mae thote yone, htone thote yone lout pae tat naing tar :p
နောက်တစ်ဝက်ကို ဘယ်တော့လောက်သိရမလဲ …
ချိန်းတဲ့နေ့ ဘယ်နေ့လဲ ဆိုတာ လက်တို့ဖို့ မမေ့နဲ့ဦး ကဗျာဆရာ …
« ခွေးများသာ သေးပေါက်သည်